Paragoay: Voaongana ny Filoha Fernando Lugo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Jolay 2012 2:31 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Español, bahasa Indonesia, Français, polski, English
Araka ny tatitra nataonay vao haingana, dia nandatsa-bato mba hanalàna ny Filoha Fernando Lugo eo amin'ny toerany ny Loholona Paragoaiana taorian'ny fitsaràna maimaika natao. Ny Kongresy Paragoaiana koa dia nandany ny lalàna fampiatoana ny filoha, vokatry ny fomba nitantanany ny ady tany nisy teo amin'ny mpitandro filaminana sy ny campesinos (“tantsaha”), izay nahafatesana olona 17 (mpitandro filaminana fito sy tantsaha folo ).
Nisy solon-tenan'ny Firaisan'ny Firenena ao Amerika Atsimo tonga tany Paragoay mba hihaona amin'ny governemanta sy ny mpanohitra izay nanery ny fampiharana ny lalàna fampiatoana ny filoha. Ny UNASUR dia nampitandrina ny fisian'ny “fanonganam-panjakana ankolaka” sy ny vokatra mety ho entin'ny fampiatoana ny Filoha eo amin'ny fireneny.
Androany, ny Loholona izay fehezin'ny mpanohitra dia nandany tamin'ny isam-bato 39 no 4 fa meloka noho ny faharatsian'ny fitondrany i Fernando Lugo, araka ny tatitra nataon'ny gazety Paragoaiana ABC [es}. Fotoana fohy taorian'izay dia nanao fanambarana i Fernando Lugo fa manaiky ny fialàny.
Nisy fihetsiketsehana fanoherana nipoitra tampoka teo ivelan'ny Kongresy mampitovy io dingana io amin’ ny fanonganam-panjakana. Mpampiasa Twitter maro no nitatitra fifandonana [es] sy famoretana ataon'ny mpitandro filaminana [es].
Ny mpampiasa aterineto dia naneho mavitrika ny heviny ny amin'ny fivoaran'ny toe-draharaha ankehitriny.
Estela Nuñez Acosta (@Jesudi) dia mitanisa ny fehezanteny naverin'ny mpanao lalàna izay nandany ilay fampiatoana ny Filoha ary manampy hoe :
“Ho an'ny fanamelohana”…Tsy mino aho fa ireo izay voalaza ho nanao kolikoly dia ho sahy hanonona ity fehezanteny ity. #JuicioPolitico‬ (“Fitsarana Politika”)
Nandritra izay fotoana izay, Alfredo Morinigo (@alfmorinigo) [es] dia mibitsika hoe :
Mendrika an'i #Lugo‬ ny ‪#JuicioPolitico‬ (“Fitsarana politika”). Nefa, raha 9 volana monja mialoha ny fifaranan'ny fitondrany dia tsy hitako izay antony hanaovana an'izany.
Momba ilay fitsaràna, Sergio Lahaye (@SergioLahaye) [es] dia nibitsika avy any Asunción renivohitra :
Angamba tsy mahalala na inona na inona aho, fa hatramin'izao, tsy hitako izay porofo fa meloka amin'ireo fiampangana ireo i ‪#Lugo‬. Ireo mpanao politika fotsiny no mikiakiaka milaza azy ho izany.
Raha Lara Tomassi (@laratomassi) [es] kosa milaza hoe :
Niaraka niaiky izy rehetra…Sarotra ho azy ireo ny mitady ny marimaritra iraisana eo amin'ny olana mahakasika ny ara-pahasalamana, fampianarana, fitateram-bahoaka sy ny sehatra sasany mbola marefo?
Santiago Escobar (@santesgon) kosa dia maneho ny alahelony ny amin'izay zavatra fonosin'ity olana politika ity ho an'i Paragoay :
Voaongana i #Lugo‬ , anton-dresaky ny ankamaroan'ny olona ny firenentsika, mety ho voahilika tsy ho mpikambana ao amin'ny Mercosur sy Unasur intsony isika ary mety hanidy ny sisin-taniny ry zareo ‪#DesastreNacional‬ (“Faharavam-pirenena”)
Mandritra ny filazan'ny mpanao famakafakana sy ny olom-pirenena sasany fa fanonganam-panjakana io, ny hafa kosa, toy ny mpanao gazety Santiago González (@SanTula) dia niaro ny maha araka ny lalàm-panorenana io lalàna fampiatoana ny filoha io :
Ny fitsarana politika dia lalàna ao anaty lalàm-panorenana natao hampiatoana filoha. Ny lalàm-panorenantsika dia ambonin'ny fifanarahana iraisam-pirenena.
Ny Filoha Lefitr'i Fernando Lugo, Federico Franco, no handray ny toeran'ny Filoham-pirenena vaovao any Paragoay, ary hamafisin'i Myrian Jara (@My_Jara) fa hafa ny fizotran'ny raharaha raha toa ka nomen'i Lugo ny Lefiny ny fitondrana :
Tokony noraisin'i Federico Franco hatrany am-boalohany ny fitondrana ary Lugo kosa niala, raha izay, dia tsy nisy na inona na inona nitranga.
Fa ny olona sasany, tahaka an-dry Fabiana Silva (@fabisilvarojas) dia tsy nankasitraka ny andraikitra vaovao sy ny lahatenin'i Frederico Franco tamin'ny Zoma :
Ho vitany ao anatin'ny 9 volana ve ireo rehetra ireo ? Lahateny lavitry ny zava-misy ankehitriny izany. Azafady, ajanony ny halatra ry #Franco. Tsy Filohako ianao, tsy nifidy anao aho.
Hitondra hatramin'ny 2013 i Federico Franco, fotoana hahataperan'ny fitondran'i Fernando Lugo. Azo vakiana ao amin'ny Twitter miaraka amin'ny tenifototra #Lugo, #juiciopolítico,(“Fitsarana politika”), # apoyoaLugo, (“Manohana an'i Lugo aho”), #Paraguay ny tatitra misimisy kokoa sy ny hevitry ny olona sasany.